4731 पटक पढिएको
तर, रञ्जनालाई सशरीर देख्ने रहर पूरा भएको थिएन । हातमा चाबी झुन्ड्याउँदै एउटा सुगठित शरीर अर्थात् बादल चक्रवर्ती कहिलेकाहीँ देखा पथ्र्यो मुनलाइटको कार्यालयमा । तुफानले आउँथ्यो, उसको दाइ अर्थात् एलएनसँग केही पैसा लिन्थ्यो र तुफानले फर्कन्थ्यो । ऊ जसरी सिँढी उक्लने ओर्लिने गथ्र्यो नि त्यो फूर्तिचाहिँ निक्कै आकर्षक थियो । म उसलाई हेरिरहन्थेँ ।उसको डिंगो जुत्ता ।टाइट जिन्स पेन्ट ।सिंहको ठूलो टाउको भएको बेल्ट ।छातीमा दुईटा टाँक खुलेर देखिने उसको सुगठित छाती ।‘केटो त हिरै हो ।' मनले भन्थ्यो । यही कारणले रञ्जनाले यसलाई मन पराएकी होली । तर प्रोफाइल ? त्यस केटाको गुमनामी नामले मलाई पिरोलिरहेको थियो । एउटी चर्चित हिरोइन कसरी एउटा सामान्य केटाको प्रेममा पर्छे ? त्यसबखत यी सबै कुरा मलाई एउटा रहस्य जस्तो लाग्थ्यो । तर रञ्जना त्यहाँ कहिल्यै आइन । र, बादलको हातको चाबी बाइकको हो या गाडीको कहिल्यै ठम्याउन सकिन । बालदकै कारणले झन् विस्तारै हिरो बन्ने रहर जागेर आयो । मलाई रञ्जनाको नजिक पुर्‍याउने एउटै उपाय देखेँ मैले, बादललाई उछिनेर हिरो बन्ने । विस्तारै थिएटर मेरो अर्को रुचिको विषय बन्यो । काठमाडौ थिएटर भर्खर सुरु भएको थियो । समय मिलाएर त्यतै धाउन थालेँ । एक दिन कुनै अमुक फिल्मको नायक बन्ने आशामा ।
१. ‘रूपेश थापा मगर धादिङ । उमेर ९ वर्ष । बाऊ सधैं झगडा गर्थे आमैसँग । आमैले छोडेर गइन् । मलाई पनि घरमा बस्नु मनै लागेन ।...'२. ‘राजु शिवाकोटी । उमेर ११ । चितवन ।....जुत्ता टाँस्ने डेन्डड्राइट धेरै तानियो । कहिलेकाहीँ सुई पनि घोचियो ।...बिन्दास हुन्थ्यो ।...'३. ‘श्याम तामाङ । उमेर १३ वर्ष । सिन्धुपाल्चोक । घरमा धेरै काम गर्नुपथ्र्यो । घाँस काट्ने, बाख्रा चराउने । पढ्न पनि मुन लागेना । गाउँको केटाहर्ले काठमाडौ जौँ भन्यो, राम्रो खानु, राम्रो लाउनु पाइन्च भन्यो त्यसैले आको । सडकमै सुत्यो २ वार्ष ।...'४.‘ भोला काफ्ले । उमेर १२ वर्ष । ओखलढुंगा । बुबाआमाले काठमाडौंको एउटा घरमा काम गर्न राखिदिनु भयो । उनीहरूले पढाइदिन्छु भनेका थिए । स्कुल पनि पठाएनन् । काम पनि धेरै लगाए । मालिकले धेरै गाली गर्थे । अनि भागेँ म त । कसैलाई चिनेको थिइनँ । सडक मै सुत्न थालेँ ।... खीर धेरै मन पर्छ मलाई...तर ह्याँ काँ पाउनु ? '५. ‘जीवन राई । उमेर ११ वर्ष । सिन्धुली । स्कुल जाने मन छ । गोराहर्ले राति लैजान्च र बिहान छोडदिन्च । ...मलाई त काउकुति लाग्छ । तर पैसा पनि दिन्छ ।'६. ‘विजय तामाङ । उमेर १३ वर्ष । काभ्रे । पुलिसले धेरै दुःख दिन्छ । कुट्छ ।...म पनि भोलिपर्सि पुलिस बन्छ र तिनलाई ठोक्छ ।'७. ‘रामबहादुर खड्का । रामेछाप । उमेर १४ वर्ष । पानी परेपछि आमाको याद आउँछ । घरनजिकैको बारीको रूखमा आमा झुन्डिएकी थिइन् ।
हात्ती गाउँ पसेपछि स्थानीयमा त्रास 600
हेलिकोप्टरबाट उद्धारपछि जन्मिए जुम्ल्याहा शिशु 2887